ဆက်ဆံရေးမလုံခြုံမှု - သင်၏ဆက်ဆံရေးသည်မှန်ကန်မှုမရှိဟုခံစားရသောအခါ - သတင်း
နောက်ဆုံးတော့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ် တစ် ဦး တည်းထွက်စီးနင်းပြီးနောက်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သူကိုသင်အမှန်တကယ်ချစ်သောသူတစ် ဦး ရှိသည်။ အဆိုပါပျားရည်ဆမ်းခရီးကာလသည်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော်လည်းအမြဲတမ်းချည်နှောင်ခြင်းမရှိဘဲအမြဲတမ်းမသွားနိုင်ပါ။ ဆက်ဆံရေးမလုံခြုံမှုသပိတ်မှောက်။
အားလုံးဆက်ဆံရေးဟာလွင်ပြင်ရကနေရွက်လွှင့်သည်မဟုတ်, ကြောင်းသေချာပေါက်ကပျက်ကွက်မှုအတွက်ပျက်စီးခြင်းရဲ့မဆိုလိုပါ (ပဲ Love Island မှ Cara နှင့် Nathan ကိုကြည့်) ။ သင့်ရဲ့လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောဆက်ဆံရေးမသေချာမရေရာအပေါ်အချို့သောလမ်းညွှန်မှုအဘို့အဖတ်နေဆက်လက်။
လတ်ဆတ်သောမျက်လုံးများမှတဆင့်ကြည့်ရှုရန်ဆက်ဆံရေးမှတစ် ဦး ခြေလှမ်းပြန်ယူပါ။ သင့်ကိုယ်သင်မေးရန်ပထမမေးခွန်းကသင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုတကယ်ကြိုက်လားမလား။
သငျသညျဒါကြောင့်မျှော်လင့်အဖြေဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပါသည်ဒါမျှော်လင့်သူတို့နှင့်အတူဆက်ဆံရေးအတွက်လက်ရှိနှင့်အတူသင်ကလူတစ် ဦး အဖြစ်သူတို့ကိုအမှန်တကယ်ကြိုက်နှစ်သက်အဖြစ်ဒါဟာရီစရာအသံလိမ့်မယ် သူတို့ကိုသင်လိင်အရဆွဲဆောင်ပါသလား။ အဲဒီမေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေတစ်ခုကမဖြေနိုင်ရင်၊ ဆက်နွယ်မှုမှာမသေချာမရေရာတာဖြစ်နိုင်တယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖုန်းနှင့်အင်တာနက်မရှိဘဲတစ်ညလုံးသူတို့နှင့်အတူနေနေသည်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ မင်းရူးသွားမှာလား ဤအရာသည်သင့်အားနောင်အနာဂတ်ဆက်ဆံရေးကိုထိုးထွင်းသိမြင်စေနိုင်သည်။
နောက်ထပ်မေးရမည့်မေးခွန်းမှာသင်၌မည်သည်သောစုံတွဲနှင့်မည်သည့်အရာ၌ရှိနေချင်သနည်း။ သင်ကလူတစ်ယောက်နှင့်နေပြီးတစ်ကိုယ်ရေနေရခြင်းနှင့်သင်၏သူငယ်ချင်းများအားလုံးအဆက်အစပ်ရှိနေခြင်းကြောင့်သင်သာလူတစ်ယောက်နှင့်အတူနေလျှင်အားလုံးထိုက်တန်သည်။ စိတ်ဖိစီးမှု?
အသက် ၂၀ အရွယ်ရှိ Edinburgh Uni မှဒေစီသည်သူမအနေဖြင့်ဆက်ဆံရေးမလုံခြုံမှုခံစားရသည်နှင့်အမျှမေးခွန်းများစတင်မေးမြန်းခဲ့သည်။ သူကငါတကယ်ကိုကြိုက်လား၊ မရတာလား၊ သူငါ့ကိုသဘောကျလို့လားဆိုပြီးစပြီးတွေးမိတယ်။
ငါချိန်းတွေ့တဲ့သူနဲ့ကျေနပ်ရောင့်ရဲတယ်လို့ထင်တဲ့အချိန်မှာသူကပိုပြီးစိတ် ၀ င်စားလာတယ်လို့ခံစားမိတဲ့တစ်စုံတစ် ဦး ကိုဘာကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားရတာလဲလို့ကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ငါကသီးသန့်ကြားဆက်ဆံရေးဖြစ်လာမတိုင်မီငါအဖူးအငုံထွက်ထဲမှာနှုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
ဒါကြောင့်သင်အဆုံးသတ်သင့်မသင့်သိရန်သိသာထင်ရှားသောနည်းလမ်းတစ်ခု? သင်တစ်စုံတစ် ဦး အပေါ်နှိပ်စက်စတင်လျှင်။ မိုက်ကယ်မဖြစ်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ ဦး ။
သို့သော်ကဲ့သို့ ... အဘယ်ကြောင့်မိုက်ကယ်အမြဲသူတို့ထွက်ခွာပြီးနောက်သည်သူ၏ယခင် '' ချစ်သူများ '' badmouthing သလဲ? #LoveIsland pic.twitter.com/fmmZHnhTpt
- Taehyung ၏အသုံးပြုသောတစ်ရှူး (@taesusedtissues) ဇူလိုင်လ 19, 2019
ဒီဆက်ဆံရေးဟာကျန်းမာပါသလား။ ၎င်းသည်အစတွင်သာမကမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုဆက်ဆံရေး၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သင့်သည်။ သင်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုပထမ ဦး ဆုံးစတွေ့စဉ်ကအရာရာတိုင်းဟာအရမ်းလတ်ဆတ်လွန်းလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အနီရောင်အလံများကိုရှာဖွေရန်၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစု၏စကားကိုနားထောင်ရန်အရေးကြီးသည်။ ဆက်ဆံရေးမလုံခြုံမှုသည်မကြာခဏဆိုသလိုသင်၏အပြောစကားဖြစ်နိုင်သည်။
သူတို့ကိုသင်ပိတ်ဆို့မထားပါနှင့်၊ သူတို့သည်သင့်ကိုယ်သင်သိသည်ထက်သူတို့သည်သင့်ကို ပို၍ သိကြသည်! သိသာထင်ရှားတဲ့ယင်း၏သင်၏အသက်တာဒါပေမဲ့သူတို့ပဲသင်တို့အဘို့အထွက်ရှာကြသည်။
ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သောဆက်ဆံရေးကိုတန်းတူညီမျှမှုနှင့်လေးစားမှုရှိသည့်နေရာတွင်အာဏာနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအပေါ်အခြေခံသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ စော်ကားမှု၊ အရှက်ရစေခြင်း၊ အမှန်တကယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုပြုရန်နည်းလမ်းအားလုံးသည်ကြမ်းတမ်းသောဆက်ဆံရေး၏အမှတ်အသားဖြစ်သည်။
သိသာထင်ရှားတဲ့သည်ဤအဆင်ပြေမဟုတ်ပါ - ဤဆက်ဆံရေးဟာမသေချာမရေရာမှုအတွက်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်လျှင်သင်ရှေ့သို့ရောက်နေစဉ်အတွင်းဖြတ်တောက်ခြင်းကိုဖြတ်ပစ်လိုက်ရုံသာဖြစ်သည်။
နောက်တစ်ခု - ick အတွက်အလံနီကိုမရောထွေးပါနှင့်။ တစ်ခုခုကသင့်ကိုစိတ်ပူနေရင်အလေးအနက်ယူပါ။
သင်၏ခံစားချက်များကိုဤသို့ခံစားမိစေရန်ဘာမျှမဖြစ်ခဲ့ပါကသင့်ရှုထောင့် မှနေ၍ သင်၏ခံစားချက်များကိုသာပြောဆိုပြီးသင့်လက်တွဲဖော်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြခြင်းမရှိပါကသတိရပါ။
အခြေအနေများစွာတွင်၊ ခံစားချက်များကိုပြောဆိုခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးမည်သည့်နေရာသို့သွားသည် ((လူတစ်ယောက်လျင်မြန်စွာရွေ့လျားနေသည်ဟုခံစားရသူတစ် ဦး လျှင်ပင်) သည်သင်၏စိတ်ကိုနောက်ကွယ်ရှိစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းသောအတွေးများကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။
အမျိုးသမီး ၈၂% သူတို့အဘို့မိမိတို့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရဲ့မေတ္တာ၌မလုံခြုံခံစားရတယ် ။ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အားလုံလောက်စွာမမြင်ခြင်းမှသူတို့မထိုက်တန်သောသို့မဟုတ်မနာလိုမှုခံစားရခြင်းမှတစ်စုံတစ်ရာကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
Coventry တက္ကသိုလ်မှအသက် ၂၁ နှစ်က Maddy က“ ငါဒီကောင်လေးကိုတွေ့နေတာ။ သူကငါတွေ့ဖူးသမျှထဲမှာအသင့်တော်ဆုံးရည်းစားဟောင်းတစ်ယောက်ပါ။ ငါသူမထက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း, သူမ၏ Insta စစ်ဆေးခြင်း, ငါသူမ၏ထက်လျော့နည်းစဉ်းစားနည်းနည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသွား၏။
ငါကလွှတ်ပေးရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာသူမ၏ insta ကိုမရပ်တန့်ရန်နှင့်ငါလုပ်သည့်တိုင်အောင်အတုပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ငါသူမကဲ့သို့ကောင်းသောသူနှင့်ထိုက်တန်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောသည်ငါပဲယုံကြည်တယ်။
အခြားသူတစ် ဦး ဦး နှင့် 'သင်မည်သို့ခံစားရသည်ကိုကြည့်ရှုရန်' မလုပ်ပါနှင့်။ သင်သာလျှင်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုထိခိုက်နာကျင်စေပြီးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းမှဒစ်ခ်ျကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်။
မှတ်သားရမည့်အဓိကအချက်မှာ - ထိုကဲ့သို့သောအရာမရှိပါ 'ပုံမှန်ဆက်ဆံရေး' နေပါစေကလူပြောသောစကား။ သင်ဆက်ဆံရေးမလုံခြုံမှုရရှိပါကဆက်လက်ရှိနေခြင်း၊ သူငယ်ချင်းများတည်းခိုခြင်းသို့မဟုတ်လုံးဝပြတ်တောက်ခြင်းရှိမရှိသင့်အတွက်မှန်ကန်သောခံစားမှုမျိုးကိုပြုလုပ်ပါ။ သင်ကကျိန်းသေပျော်ရွှင်လိမ့်မည်။
• ချိန်းတွေ့ဖို့ Tab ရဲ့လမ်းညွှန်
• ဤအရာသည် uni တွင်သင်၏ရည်းစားနှင့်အတူပြောင်းရွှေ့လိုခြင်းဖြစ်သည်
• uni မှာဆက်ဆံရေးနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ဘယ်လို